नेपालमा अचम्मै भोः एक महिना श्रीमतीसँगै बसेका श्रीमानमा कोरोना देखियो, श्रीमतीमा देखिएन ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा अचम्मै भोः एक महिना श्रीमतीसँगै बसेका श्रीमानमा कोरोना देखियो, श्रीमतीमा देखिएन !
काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित पेप्सीकोलामा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा भेटिएका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित परिवारका एक सदस्यको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ ।सोमबार गरिएको ¥यापिड टेस्टका क्रममा एण्टीबडी पोजेटिभ देखिएपछि सासु र श्रीमानसँगै पाटन अस्पताल भर्ना गरिएकी महिलाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
ती महिलाकी ८१ वर्षीया सासु र ५८ वर्षका श्रीमानमा मंगलबार कोरोना पुष्टि भएको थियो । महिलाको पनि पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पुनः परीक्षण गरिएको हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महिलाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिए ।